Filtrer les éléments par date : vendredi, 18 octobre 2019
vendredi, 18 octobre 2019 21:34
Tana Masoandro: Mbola tsy tafavoaka ny ala ilay Zandary voadaroka
Omaly hariva vokatry ny sakoroka teny Ambohitrimanjaka, toerana kasaina hanaovana ny tetikasa Tana Masoandro, dia voadaroka tamin'ny lohany ny Zandary iray. Nahiditra hopitaly eny amin'ny HJRA izy.
Omaly ihany dia nampatorian'ny mpitsabo izy, satria dia voa mafy tokoa ny lohany. Androany maraina dia nandalo fandidiana, anesorana ireo ra miandrona ao anatin'ny lohany, vokatry ny daroka.
Io hariva io dia efa mahatsiaro tena izy, fa mbola tsy tafavoaka ny ala satria mbola atahorana ny ratra mafy nahazo ny lohany.
vendredi, 18 octobre 2019 21:23
Raharaha Ambohitrimanjaka: Nanao fanambarana miaraka ny Antenimierandoholona, CFM, HCDDED ary CNIDH
Nivory tao amin’ny CFM Ampefiloha, androany zoma 18 oktobra 2019, ireo filohan’ny andrimpanjakana efatra, dia Rakotovao Rivo (Antenimierandoholona), Maka Alphonse (CFM), Navony Pierre Lenoble (HCDDED) ary Rabenoro Irène (CNIDH). Nanao fanambarana iraisana izy ireo miantso fitoniana amin’ny andaniny sy ny ankilany indrindra amin’izao ankatoky ny fifidianana izao.
Miantso ny tomponandraiki-panjakana ihany koa izy ireo hampiato ny fanombohan’ny asa, ary miantso ny vahoaka ihany koa hampiato ny fihetsiketsehana ka hifanantona.
Mahita ihany koa ireto filohan’ny andrimpanjakana ireto fa tsy ampy ny mangarahara sy ny serasera manodidina ny fanatanterahana ny tetikasa eny Ambohitrimanjaka.
vendredi, 18 octobre 2019 16:54
JR Métaux Ampangabe: Nisy ny inspection de travail nidina teny ifotony
Rehefa nandalo teny ny solotena avy tao amin'ny CNAPS, izay nahatratra zaza tsy ampy taona miasa ao amin'ity orinasa mpandrendrika vy eny Ampangabe Analamanga ity, dia tamin'ity herin'andro ity indray no nidina teny an-toerana ry zareo ao amin'ny inspection du travail.
Hatreto moa tsy mbola fantatra ny vokatry ny fidinana teny an-toerana, na dia hita sy mampiahiahy aza ny mahita ireto mpiasa aman-jatony tsy misy fiarovana ara-tsosialy, tsy misy contrat de travail fa miasa tselika mandray karama isan'andro, nefa mpiasa efa miasa aman-taonany maro.
Tsy hita ihany koa hatreto ny fanadihadiana momba ireto mpiasa vahiny amanjatony latsaka, ka ny atsasany dia teraka ny 1 janoary avokoa, manana taratasy ara-dalàna ve izy ireo, ary indrindra, manaja ny andininy faha 43 ny lalanan'ny asa ve, izay mametraka fa tsy maintsy manana Visa de travail, izay voamarin'ny ministeran'ny asa sy ny inspection de travail, izay vao mahazo miasa eto Madagasikara.
vendredi, 18 octobre 2019 16:36
Litige Air Madagascar - Air France
La compagnie nationale va exercer tous les recours légaux à sa disposition.
Efa any Namibia maka volontany, ary efa niatrika fanazarantena, nitsapa kianjan’ny Sam Nujoma Stadium ny Barea, hiatrehana ny lalao miverina amin’i Nambia hatao rahampitso.
Efa nandresy 1 noho 0 ny Barea tamin’ny lalao mandroso tetsy Mahamasina, Madagasikara. Ady sahala dia ampy hahazoan’ny Barea tapakila hiazoana an’i Cameroun hiatrehana ny CHAN 2020.
vendredi, 18 octobre 2019 15:55
Antsiranana: 39,73% ny taham-pahafahana bakalôrea 2019
Anio zoma 18 oktobra 2019 amin’ny 6ora hariva no havoaka ny voka-panadinana bakalôrea 2019 ho an’ny faritany Antsiranana na sokajy ankapobeny na teknika. 39,73% ny taham-pahafahana fanadinana tamin’ity, ho an’ny sokajy ankapobeny.
vendredi, 18 octobre 2019 15:22
Morondava-Menabe: Miandry fahatongavan’ny solika hamerenana amin’ny laoniny ny jiro sy rano
Sora-tanana, toa manaporofo fa nilaozan’ny herinaratra hatramin’ny fanontana printy, izay no nanaovan’ny Jirama Morondava ny filazana manazava ny olana amin’ny famatsiana jiro sy rano eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe. Miandry fahatongavan’ny solika ny eto an-toerana hamerenana amin’ny laoniny ny famokarana sy fitsinjarana jiro sy rano.